Beessha Absuge Qombor Cadaan Indiris ee reer maxamed Maalin oo doortay Nabaddoonka reer Culusoow.” Sawirro” – Kismaayo24 News Agency
by admin 30th December 2017 0120
Beesha Absuge Qombor gaar ahaan beesha Cadaan Indiris ayaa Maanta magaalda Muqdisho ee dalka Soomaaliya Ku caleemasaartay Nabdoonka reer Culusoow Maxamed Maalin, Nabaddoon Xasan Cabdulle Cosoble oo ah nin dhalanyaro ah aqoon fiicanna u leh dhanka dhaqanka.
Xafladda lagu duubayay Nabaddoonka ayaa waxaa ka soo qeybgalay dhaqanka beelweynta Reer Maxamed Maalin ee ah Curudka beesha absuge Cadaan Indiris.
Marka Hore waxaa hadalka Furtay Aqoon yahanad Maryan Cabdulle oo soo dhaweysay martida ka soo qeyb gashay waxaana goob joog ahaa Nabaddoonka Guud ee Beesha Nabaddoon, Dr. Ibraahim Seyle oo aad u soo dhaweeyay nabaddoka cusub.
Sidoo kale waxaa ayagane goobta ka hadlay odayaasha ka soo qeybgalay caleema saarka Nabaddoonka oo si weyn u soo dhaweeyay, Beesha reer maxamed Maalin ayaa waxeey sanado badan soo maamulayeen beelweynta Waceysle ayagoo caan ku ahaa dhanka dhaqan iyo isku xirka Beelweynta Mudulood.
Ugu danbeyn waxaa goobta ka hadlay Nabaddoonka Beesha reer Maxamed Maalin Dr. Seyle iyo Nabaddoonka Cusub Nabaddoon Xasan Cabdulle waxeeyna balan qaaeen ineey isku xiri doonaan Beelweynta Waceysle ee Abgaal
DegDeg:-Qarax miino Oo lala beegsaday Amisom
Hordhac: Man City vs West Ham, Iyo Kulamadii Xalay Laga Ciyaaray Horyaallada Kala Duwan Ee Qaarada Yurub
Dhagayso:- Madaxweynaha Puntland oo soo dhaweyeey isasoo dhibitaanka Sheekh Atam
Wadooyinka Muqdisho Oo Xiran Iyo Ammanka Oo Aad loo adkeeyay